Ady & Fifandirana · Septambra, 2007 · Global Voices teny Malagasy
Ady & Fifandirana · Septambra, 2007
Tantara mikasika ny Ady & Fifandirana tamin'ny Septambra, 2007
Myanmar vao hanakoako
Fahalalahàna miteny 28 Septambra 2007
Mampitandrina ny mpanao fihetsiketsehana hiala ny arabe ny governemanta ao Myanmar taorian’ny filaharambe tao Yangon omaly. Notarihan’ny mpitoka-monina ny fihetsiketsehana ary mitaky fahafahana sy fanafoanana ny fanondrotam-bidin’entana nolazaina tamin’ity volana ity. Manohana sy mitoraka ny eritreriny ny mpibilaogy. Mampahatsiahy I Olom-pirenen’I Marsa fa niaina toe-javatra sahala amin’izao ihany koa ny...
Myanmar ny andron'ny 26 septambra
Lahatsoratra Malaza 28 Septambra 2007
Namoaka sarimihetsika roa ilay mpampiasa YouTube dennisbier09 ary nanoratra : Ny sary faharoa dia mampiseho ny mpitoka-monina sy ny olom-pirenena eo ampihetsiketsehana hanoherana ny fitondrana jadon’i Birmania (Myanmar). Nalaina tao an-drenivohitra Yagon (Rangoon) ny alatsinainy 24 septambra 2007 tolakandro tao anaty orana ny sary. Awzar Thi kosa nanangona ny sarim-pihetsiketsehana...